Karman व्हीलचेयर र पसल म्यानुअल व्हीलचेयर
श्रेष्ठ व्हीलचेयर ब्रान्ड र हेल्थकेयर च्वाइस सन 1994
व्हीलचेयर निर्माण र चिकित्सा आपूर्ति अनलाइन स्टोर: व्हीलचेयर, हल्का, अल्ट्रा हल्का, स्थायी शक्ति, म्यानुअल व्हीलचेयर, यातायात व्हीलचेयर, बिजुली ह्वीलचेयर, Rollators, वाटरहरू र सक्रिय व्हीलचेयर तपाइँलाई सिधै पठाइयो। साथै, एक राम्रो व्हीलचेयर बनाउनु पर्छ तिम्रो जीवन सजिलो। तेसैले, हामी ergonomics र हल्का मा विशेषज्ञता। उत्कृष्टता को माध्यम बाट गतिशीलता तपाइँ प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ!
Karman व्हीलचेयर को राष्ट्र को अग्रणी निर्माता हो
Karman हेल्थकेयर विनिर्माण र घर चिकित्सा उत्पादनहरु को वितरण मा एक अग्रणी आविष्कारक भएको छ 1994 पछि। हामी सबै भन्दा राम्रो कुर्सीहरु को केहि छ। नतिजाको रूपमा, Karman शक्ति र म्यानुअल व्हीलचेयर को एक पूरा लाइन प्रदान गर्दछ, हिंड्नेहरू, rollators, र स्कूटर, अक्सिजन नियामक, बाथरूम सुरक्षा र अन्य घर हेरचाह उत्पादनहरु। तेसैले, अब पसल र बचत गर्नुहोस्! हामी सबै प्रकार को मा विशेषज्ञता गतिशीलता उत्पादनहरु। हाम्रो व्हीलचेयर तपाइँ एक प्रतिस्पर्धा द्वारा बेजोड अनुभव संग प्रदान गर्दछ। हाम्रो जानकार स्टाफ संग आज बोल्नुहोस् तपाइँ कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ। पत्ता लगाउनुहोस् किन हाम्रो पेटेन्ट ergonomic सीटहरु आराम को लागी अग्रणी नवाचार उद्योगहरु हुन्!
कर्मा® व्हीलचेयर को एक सय भन्दा फरक मोडेलहरु कि तपाइँ बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ प्रदान गर्दछ। उद्योग मा एक नेता को रूप मा, हामी एक विविधता प्रदान गर्दछ मैन्युअल व्हीलचेयरsसहित यातायात व्हीलचेयरs, मानक व्हीलचेयरs, हल्का व्हीलचेयरs, अल्ट्रा लाइटवेट व्हीलचेयरs, एर्गोनोमिक व्हीलचेयर र अधिक। तेसैले, हामी यहाँ तपाइँको सबै को लागी छौं गतिशीलता आवश्यकताहरु। एक श्रेणी, मोडेल, रंग वा यहाँ सम्म कि मूल्य बिन्दु को छनौट अन्तिम प्रयोगकर्ता को लागी हाम्रो "कला को राज्य" लाई पूर्ण रूपमा सराहना गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। गतिशीलता उत्पादनहरु। हाम्रो पेटेंट जाँच गर्न नबिर्सनुहोस् एस ERGO एस आकार आसन प्रणाली। हामी एक आदर्श कुर्सी खोज्न प्रतिबद्ध छौं। नतिजाको रूपमा, हामी तपाइँको लागी समर्पित छौं गतिशीलता आवश्यकताहरु। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् स्थायी व्हीलचेयर र नवीनतम प्रविधि. तपाइँको विशिष्ट आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो कुर्सी खोज्नुहोस्।
Karman मा, हामी म्यानुअल व्हीलचेयर को लागी छनौट गर्न को लागी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन्। सामान्य मा, यदि तपाइँ आफैंलाई एक पा wheel्ग्रा कुर्सी मा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ उपलब्ध सबैभन्दा हल्का सबैभन्दा आरामदायक व्हील-कुर्सी चाहानुहुन्छ। उपलब्ध सबै कोटिहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् र त्यसपछि उत्पादन वजन र बजेट द्वारा छनौट गर्नुहोस्। सबै कुर्सीहरु फरक फरक गरीएको छ। तेसैले, उनीहरु सबै आफ्नै तरीका बाट अद्वितीय छन्। एक Karman कुर्सी किन्नु साँच्चै एक किन्नु जस्तै हो अनुकूलन कुर्सी। हामी कुनै पनी पसल बाट widdest चयन छ। एक सिंहावलोकन मा शुरू गरौं। यहाँ केहि श्रेणीहरु र तपाइँको समीक्षा को लागी जानकारी छन्:
धेरै मानक वजन पा wheel्ग्रा कुर्सीहरु 34 पाउन्ड मा शुरू हुन्छ। यो एक हुनेछ मानक weght व्हील चेयर। यो एक महान विकल्प हो जब तपाइँ एक व्हील-कुर्सी को जरूरत छ कि बारम्बार प्रयोग गरीने छैन। सामान्यतया,3घण्टा वा कम प्रति दिन र कम स्थानान्तरण संग। यो प्रकार हो कि तपाइँ एयरपोर्ट वा अस्पतालहरुमा देख्नुहुन्छ। अन्तमा, कुनै frills र केहि आधारभूत। डाक्टरको आदेश अनुसार मात्र। हाम्रो पूर्ण चयन फिक्स्ड legrests र armrests व्हीलचेयर संग वैकल्पिक उचाई legrests र हटाउन सकिने armrests संग सबैभन्दा आधारभूत मोडेल बाट उपलब्ध छ। हामी वास्तव मा अस्पतालहरु र एयरपोर्टहरु आपूर्ति गर्छौं त्यसैले यदि तपाइँ त्यहाँ एक देख्नुहुन्छ भने आश्चर्यचकित नहुनुहोस्। कहिलेकाहीँ एक आधारभूत कुर्सी सबै तपाइँलाई चाहिन्छ। विशेष गरी यदि यो एक अस्थायी आवश्यकता हो। त्यहाँ संग मोडेलहरु पनि छन् वैकल्पिक सामान आफ्नो व्हील-कुर्सी बृद्धि गर्न. फोम कुशन र/वा जेल कुशन अतिरिक्त आराम को लागी प्रदान गर्नुहोस्।